एक लाख ३७ हजारको मनोनय दर्ता « Lalitpur Khabar
एक लाख ३७ हजारको मनोनय दर्ता
१३ वैशाख ०७९, काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न पदमा एक लाख ३७ हजार ४३ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगले आज बिहान ७ः३० बजे सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कानुसार पालिकाको प्रमुखमा तीन हजार २७६ र उपप्रमुखमा दुई हजार नौ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
काठमाडौंको तारकेश्वरमा चक्रपथ निर्माण गरी यातयात संचालन गर्ने नगरपालिकाको योजना
१३ असार ०७९, काठमाडौं । काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा आगामी पाँच वर्षभित्र चक्रपथ निर्माण गरी यातायात
साउन १ देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्याए ५ सय जरिवाना
९ असार ०७९, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरवासीले साउन १ गतेदेखि फोहोरको वर्गीकरण (कुहिने र नकुहिने
हिमालयन हाइड्रोको आइपीओ असार १५ गतेदेखि आउने, दोर्दीको बाँडफाँड कहिले ?
७ असार ०७९, काठमाडौं । हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनीले असार १५ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर
फेरि बढ्यो पेट्रोलको मूल्य, हेर्नुहोस् कति ?
५ असार ०७९, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य बढाएको छ । आइतबार राति